Windows7कसरी पुनर्स्थापना?
एक पूर्ण सामान्य अवस्था शुरू। तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरमा आउन र यसलाई सक्रिय गर्न प्रयास गर्नुहोस्, तर तपाईं अपरेटिङ सिस्टम डाउनलोड गर्न सक्छन् स्क्रिनमा केही अनौठो कारण लागि लोड छैन। कसरी रिकभर गर्न Windows 7? यो प्रश्न पक्कै पनि कम से कम एक पटक देखा छन्। प्रणाली कारण उचित छैन tinning वा भाइरस गर्न "" गिर गर्न सक्नुहुन्छ। रिकभरी Vindovs7धेरै तरिकामा पूरा हुन सक्छ। तिनीहरूलाई केही जटिल छन् र धेरै कम्प्यूटर सीप, अन्य छरितो र उपलब्ध लगभग जो कोहीले गर्न आवश्यक छ। तपाईंले तिनीहरूलाई केही सिक्न तल।
पहिलो तरिका - एक रिकभरी डिस्क (तपाईं एउटा छ मानेर) संग windose7पुनर्स्थापना छ। यो सरल तरिका मध्ये एक छ, लगभग रूपमा सम्पूर्ण प्रक्रिया स्वतः ठाउँ लिन्छ र तपाईं केवल मापदण्डहरू चयन गर्न आवश्यक छ। कसरी प्रणाली बहाल यो विधि प्रयोग गरेर Windows 7? यो गर्न, BIOS मा ड्राइव OSes रिकभरी साइन मा डिस्क सम्मिलित, बक्स अर्को डिस्क उपकरणबाट प्यारामिटर डाउनलोड गर्न जाँच गर्नुहोस्। सेटिङ बचत र पीसी रिबुट। कि पछि तपाईं हुनेछ एक संवाद बक्स तपाईं चयन जहाँ मेनुबाट "प्रणाली पुनर्स्थापित गर्नुहोस्।" त्यसपछि सबै सहज छ र कुनै समस्या हुनुपर्छ।
Windows7कसरी पुनर्स्थापना तपाईं माथि-उल्लेख रिकभरी डिस्क छैन भने? एक पटक तपाईंले अपलोड, र सफलतापूर्वक चालक डाउनलोड गरिनेछ, तपाईं बहाली सिस्टम को जगेडा छवि संग7windose पूरा गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। मेनु उन्नत रिकभरी विकल्पहरू प्रयोग - तपाईं नियन्त्रण प्यानल मा यो सबै पाउनुहुन्छ। सारा प्रक्रिया पनि सहज छ। यो छवि एक निर्देशिका चयन गर्न मात्र आवश्यक छ। यो हटाउन सकिने मिडिया वा फाइल तपाईँको कम्प्युटरमा हुन सक्छ।
तर कसरी पुनर्स्थापना गर्न Windows 7, र कुनै रिकभरी डिस्क, र छवि छ भने? तपाईं आदेश लाइन को सहायता गर्न आउन सक्नुहुन्छ। तपाईंको कम्प्युटर सुरु सुरक्षित मोड , र आदेश-रेखा समर्थन संग। यो विकल्प मात्र यो कम्प्युटरमा प्रशासक को नाम मा कार्यान्वयन गरिने अवस्थामा सम्भव छ सम्झना। बुट समयमा, तल F8 समाउनुहोस्। एक पटक तपाईं Windows लोगो देख्न, आदेश शीघ्र खोल्न र निम्न आदेश मा माउन्ट: rstrui.exe। त्यसपछि प्रविष्ट गर्नुहोस् थिच्नुहोस्। स्क्रिनमा संकेतहरुको पालन गर्नुहोस्। यो विधि सबैभन्दा उपयुक्त मध्ये एक छ, तथापि, धेरै होसियार हुनु आवश्यक छ। तपाईंको पछि कम्प्युटर रिबुट, तपाईं सुरक्षित मोडमा बनाउन कुनै पनि परिवर्तन, अपरिवर्तनीय हुनेछ। र, अन्तमा, मेरो मनपर्ने व्यक्तिगत तरिका मा। छैन भन्दा सहज होस्, तर सबै भन्दा विश्वसनीय विकल्प - प्रणाली विन्डोज7पुनर्स्थापना प्रारम्भिक मापदण्डहरू आफ्नो राज्य फिर्ता रोलिङ द्वारा। उहाँको बारेमा अलग र विस्तार कुरा।
तपाईं सञ्चालन प्रणाली पुनर्स्थापना यसरी चयन भने, त्यसपछि के तपाईं साँच्चै दुई विकल्प छन्। पहिलो - तपाईं बस कम्प्युटर कारखाना पूर्वनिर्धारित सेटिङहरू र मापदण्डहरू गर्न, कार्यक्रम सबै फिर्ता, व्यक्तिगत उपकरण (जस्तै भिडियो, अडियो फाइल र चित्र), पाठ्यक्रम, यो प्रणाली स्थानीय डिस्क मा छ भने हटाइने छ। भने, त्यसपछि यो खतरा छ। दोस्रो विकल्प - बस सञ्चालन प्रणाली पुन छ।
को कसरी पुनर्स्थापना विन्डोज7अपरेटिङ सिस्टम नवीनतम पुनर्स्थापित द्वारा? यो धेरै सरल छ। तपाईं windose7महत्वपूर्ण साथ स्थापना डिस्क आवश्यक छ: उचित स्थापनाका लागि सबै चालक र उपयोगिता छ भनेर अग्रिम निश्चित। कसरी डिस्क देखि कम्प्युटर बुट, तपाईं पहिले नै थाहा छ। तपाईं सबै तयारी गरेका छन्, प्रणाली तपाईं इच्छित स्थापना निर्देशिका गर्न संकेत हुनेछ। यसलाई कडा स्थानीय डिस्क ढाँचा, र त्यसपछि यो प्रणाली स्थापना सिफारिस गरिएको छ। सम्पूर्ण स्थापना प्रक्रिया आफ्नो कम्प्युटर कन्फिगरेसन र क्षमता निर्भर 15 40 मिनेट बीच हुनेछ। सफल पुन: स्थापना पछि सिस्टम भने, आवश्यक प्रत्येक स्थापना पछि पीसी पुनः सुरु, प्रत्येक उपकरणको लागि सबै चालक बिस्तारै सेट र। यहाँ, सामान्य र सबै।
यो मात्र कुनै कुरा धन कसरी असल र विश्वसनीय ठीक थिएनन् थप्न रहन्छ, सबै आफ्नो सिस्टम "दुर्घटना" जोगिन प्रयास गर्नुहोस्। untested कार्यक्रम र उपयोगिता स्थापित छैन, र पनि एन्टिभाइरस प्रयोग गर्न निश्चित हुन। र कसरी विन्डोज7आफ्नो सिस्टम पुनर्स्थापना, तपाईं निर्णय।
समाधान: "यन्त्र स्मृति पर्याप्त छैन अन्तरिक्ष।" गुगल प्ले र यसको त्रुटिहरू
कसरी विन्डोज अदृश्य फोल्डर सिर्जना गर्न विवरणहरू 7
कम्प्युटर अकस्मात दुर्घटनाहरु वा एउटा अनपेक्षित त्रुटि: के?
Predestination को समझ को अपरेटिङ सिस्टम तत्व: Windows7गर्न द्रुत उपकरणपट्टी सुरु
आराम आराम: चयन Hurghada मा सबै भन्दा राम्रो होटल
किन विषालु माकुरा को सपना? आक्रमण, को विषालु माकुरा खानको
होटल हाइल्यान्ड बीच Resort उत्तर गोवा मा होटल को3समीक्षा
हामी एक सुन्दर घण्टा खर्च "स्वस्थ जीवन शैली"
पैसा स्थानान्तरण? Sberbank - सधैं त्यहाँ, सधैं चाँडै र मजबूती!
ट्याब्लेट कसरी मिलाउने यदि यो सक्रिय छैन?
मेरी Lermontov "तीन Palms": एक कविता विश्लेषण
तयारी "एल्बोन": प्रयोग, संरचना, मूल्यहरू, समीक्षाहरूको लागि निर्देशनहरू
Anatoliy Smiranin: प्रसिद्ध अभिनेता को जीवनी र Filmography